Donald Trump oo Ilhaan Omar ugu baaqay in ay is casisho – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Arbaco, Feberaayo, 13, 2019 (HNN)- Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa si toos ah ugu baaqay in ay is casisho Ilhaan Omar oo ka mid ah xubnaha Congress –ka kaddib qoraalkeedii loo arkay Yahuud naceybka oo ay soo dhigtay boggeeda Twitter –ka.
Wuxuu sheegay madaxweyne Trump in Yahuud naceybku marnaba boos ku laheyn Congress –ka gudihiisa, sidaa daraadeed waxaa uu ugu baaqay Ilhaan in ay is casisho xubinnimada Congress ka ama guddiga arrimaha dibedda oo ay ka tirsan tahay.
Ilhaan Omar oo ah gabar asalkeedu Soomaali yahay kana tirsan Xisbiga Dumuqraadiga ayaa dhaleeceen adag kala kulantay qoraalka ay soo dhigtay boggeeda oo ay ku sheegtay in ururka Aipac oo ah guddi u qaabilsan arrimaha Yuhuuda Maraykanka uu lacag ku bixiyo taageerada Israa’iil, laakiin raaligalin ayeey markii danbe ka bixisay.
Madaxweyne Trump ayaa raaligalinta Ilhaan ku sheegay mid aysan daacad ka aheyn, isaga oo intaa ku darray in erayada ay isticmaasha yihiin kuwo gunta hoose ee qalbigeeda uga yaala.
Waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha dalka Mareykanku si toos ah u weerarro Ilhaan Omar dhawaan ku biirtay Congress –ka Mareykanka.
Donald Trump oo Ilhaan Omar ugu baaqay in ay is casisho added by admin on 13/02/2019